Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny fandaniana amin'ny dia any Etazonia dia naminavina fa handentika 45% amin'ity taona ity
Ny fandaniana amin'ny fivezivezena totalika any Etazonia dia vinavinaina hidina 45% amin'ny faran'ity taona ity, izay manaitra ny antso ho an'ny fepetra federaly hanohanana ny indostria izay iray amin'ireo mpampiasa ambony sy mpanondrana amerikana talohan'ny areti-mandringana.
Raha ny tombana farany, ny fandaniana amin'ny dia an-trano dia vinavinaina hidina 40% (avy amin'ny $ 972 miliara amin'ny taona 2019 ka hatramin'ny $ 583 miliara amin'ny taona 2020) raha ny fandaniana anatiny miditra kosa dia antenaina hahatratra 75% ($ 155 miliara ka hatramin'ny $ 39 miliara).
Ny fitsangatsanganana an-trano totalin'ny mponin'i Etazonia dia antenaina hidina 30% hatramin'ny taona lasa ka hatramin'ny 1.6 miliara - ny isa ambany indrindra hatramin'ny 1991, taona iray hafa resin'ny resa-be.
Tonga ireo isa marimaritra iraisana rehefa nanomboka ny "Herinandro Virtual Hill" voalohany i US Travel, izay mampifandray ireo mpikambana ao amin'ny indostria amin'ireo mpanao lalàna hiresaka momba ny laharam-pahamehana sy ny filàna. Mpikambana indostrialy efa ho 300 no handray anjara amin'ny fivoriana an-tserasera 75 miaraka amin'ireo mpanao lalàna ao amin'ny Antenimiera sy ny Antenimieran-doholona.
"Ny angon-drakitra dia milaza amintsika fa ny fitsangantsanganana sy ny fizahan-tany dia simba be kokoa noho ny indostria amerikana hafa noho ny fahasimban'ny toekarena noho ny krizy ara-pahasalamana," hoy izy US Travel Association Filoha lefitra misahana ny raharaham-panjakana sy ny politika Tori Emerson Barnes. "Raha jerena fa ny dia dia nampiasa iray tamin'ny Amerikanina 10 ary fanondranana laharana 2 any Etazonia talohan'ny areti-mandringana, ny fanohanana an'ity orinasa ity hatramin'ny dingana fanarenana dia tokony ho laharam-pahamehana amin'ny firenena.
"Be ny fangatahanay ho an'ny mpanao lalàna, saingy tsotra ihany koa izy ireo: mila fanamaivanana, fiarovana ary fanentanana ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany izahay mba hamakivakiana ny krizy ratsy indrindra ary hanampiana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena."
Anisan'ireo laharam-pahamehana amin'ny politika ireo mpikambana ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany hiresaka ao amin'ny Kaongresy amin'ity herinandro ity:
Manitatra ny fividianana Programme Protection Protection ho an'ny fikambanana marketing (DMO). Na dia masinina lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toekarena eo an-toerana sy isam-paritra aza izy ireo, ny ankamaroan'ny DMO dia tsy manan-kery fanampiana amin'izao fotoana izao satria mitondra anarana tsy mitady tombom-barotra na fanjakana matanjaka.
Fandrisihana hetra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena mandeha, ao anatin'izany ny trosa fandoavan-ketra vonjimaika; famerenana amin'ny laoniny ny fihenan'ny fialamboly; Fanohanana ireo sehatra fihaonana sy hetsika voavaha mafy; ary mari-bola amin'ny hetra ho an'ny fitaovam-piarovana manokana (PPE) sy ny fanamafisana ny fotodrafitrasa.
Fiarovana amin'ny fitoriana tsy misy dikany momba ny COVID ho an'ny orinasa manaraka ny torolàlana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana.
Manomeza fiambenana federaly ho an'ny famoahana fiantohana loza mety hitranga amin'ny areti-mandoza mba hanomezana alalana ara-bola ny orinasa amin'ny valan'aretina amin'ny ho avy na aretina hafa - toa ny lalàna momba ny fiantohana ny asa fampihorohoroana napetraka taorian'ny 9/11.
Lufthansa sy Fraport dia mampihatra ny fenitra momba ny fahadiovana ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt